मोदीको सुरक्षालाई लापरवाहीको संज्ञा दिँदै कंगनाले दिइन् यस्तो प्रतिक्रिया – Patrika Nepal
मोदीको सुरक्षालाई लापरवाहीको संज्ञा दिँदै कंगनाले दिइन् यस्तो प्रतिक्रिया
पुष २२, २०७८ बिहिबार 25
एजेन्सी, २२ पुस । पञ्जाबमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सुरक्षामा लापरबाहीको विषयलाई लिएर राजनीति चर्किएको छ । यो घटनालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खालका प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । धेरैले घटनाको निन्दा गरेका छन् । यसैबीच, बलिउड सेलिब्रेटीहरू पनि सुरक्षा उल्लङ्घनलाई लिएर आश्चर्यचकित छन् र यसबारे आफ्नो राय दिइरहेका छन्।
केही समयअघि पञ्जाबमा प्रदर्शनकारीले घेरिएकी कंगना रनौतले घटनालाई लज्जास्पद र लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण भनेकी छिन् । अभिनेत्रीले एक इन्स्टाग्राम स्टोरीमा लेखेकी छिन्,‘पञ्जाबमा के भयो लाजमर्दो छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित नेता, प्रतिनिधि र १४० करोड जनताको आवाज हुनुहुन्छ। उनीहरुमाथि आक्रमण गर्नु भनेको देशका हरेक नागरिकमाथि आक्रमण गर्नु हो । यो हाम्रो लोकतन्त्रमाथिको प्रहार पनि हो । पञ्जाब आतंकवादी गतिविधिको केन्द्र बनिरहेको छ। अहिले नै रोकिएन भने देशले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ ।’ यससँगै कंगनाले ह्यासट्याग लेखेकी छिन्, ‘भारत स्ट्यान्ड विद मोदीजी’
यस घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अनुपम खेरले लेखेका छन् – भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको सुरक्षालाई लिएर आज जुन नाटक भएको छ, त्यो पञ्जाब प्रहरी र सरकारका लागि खेदजनक र लाजमर्दो थियो । यस विषयमा देशका प्रधानमन्त्रीप्रति केही व्यक्तिको घृणा उनीहरुको कायरताको संकेत हो । तर याद गर्नुहोस्, ‘जाको राखे सायं, मार खाए ना कोई’
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ४२,७५० करोड रुपैयाँका विभिन्न परियोजनाको शिलान्यास गर्न पञ्जाबको फिरोजपुर पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री बुधबार बिहान पञ्जाबको भटिंडा विमानस्थलमा अवतरण भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । यहाँबाट उनी हेलिकप्टरबाट हुसेनवालाको राष्ट्रिय शहीद स्मारक आउनुपरेको थियो । तर वर्षाका कारण मौसम सुधार हुन २० मिनेट कुर्नुपरेको थियो ।
मौसममा सुधार नभएपछि प्रधानमन्त्रीलाई सडकबाट लैजाने निर्णय भएको हो । जसमा दुई घण्टा लाग्छ । पञ्जाब प्रहरीका डीजीपीले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको पुष्टि गरेपछि प्रधानमन्त्री मोदीलाई सडकबाट स्मारकमा लगिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्रीको काफिलाई स्मारकबाट ३० किलोमिटर टाढाको फ्लाईओभरमा पुगेपछि मात्रै केही आन्दोलनकारीले बाटो अवरुद्ध गरेको थाहा भयो । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको काफि १५–२० मिनेट त्यहीँ अड्किएको थियो ।
Prevआमा बित्दा छोराहरू आउँदै आएनन्, छोरीहरूले गरे अन्तिम संस्कार
Nextभाइरल चियावालीलाई सहयोग लिएर पुग्दा आ,शु था,म्न सकि,नन,आमाको सड,कमै ना,ङलो मा ब्यापार …
श्रीमान् विदेशबाट आएको ५ महिनामै बच्चा जन्माएकी श्रीमती र श्रीमानको बीच हा’ना’हा’न(भिडियो सहित )
आमा बन्दै काजल
सं’म्ब’न्ध वि’च्छे’द ग’रिसकेका पूर्व पतिसंग फेरी माया बस्यो,अब म के गरौं?
बिहे भैरहेको ठाउँमा अचानक पुर्ब प्रेमी आएर बेहुला कै अगाडी बेहुलीको शिरमा सिन्दुर हालेपछि…. (भिडियो हेर्नुहोस)